बुढेसकालमा हेरचाह: हामी कसरी झरनाबाट बच्न सक्छौं? | OMG समाधानहरू
वृद्ध हेरचाह: हामी कसरी जोगिनबाट बचाउन सक्छौं?
रोग नियन्त्रण र रोकथामको लागि अमेरिकी केन्द्रहरूको एक रिपोर्ट अनुसार, यो उल्लेख गरिएको छ कि मान्छे को एक तिहाई, 65 र माथिको उमेर समूहमा प्रत्येक वर्ष एक पटक भन्दा बढी हुन्छ।
फल्सले निम्न समस्याहरूको सामना गर्न सक्छ:
बिरोध र Sprains
झरना र टाउको चोट
कंधे र हिप विच्छेद
कलाई र हिप फ्रिज
डरलाग्दो डरले गतिविधिहरूको प्रतिबन्ध र विश्वासको कमीमा नतिजा गर्दछ।
यो ध्यान दिइयो कि, पुराना मान्छे सँग 12 गुणा बढी दर र पैदल यात्री र मोटर वाहन दुर्घटनाको तुलनामा।
के हामी पछाडि रोक्न सक्छौं?
हो, पतनहरू रोक्न सकिन्छ। उडानहरू उपयुक्त छन्। अधिक जोखिम कारकहरू सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिसँग चोट छ वा गिरावट छ भने, यो कुनै पनि शङ्कालाई रोक्नको लागि डाक्टरलाई परामर्श गर्न आवश्यक छ।
"रोकथाम उपचार भन्दा राम्रो छ।"
हामी कसरी जोगिन सक्छौं?
पतनबाट बच्नको लागि, निम्न कुराहरू लागू गर्न अनिवार्य छ:
व्यायाम गर्नुहोस्: पतनबाट बच्न, तपाईंले आफैलाई फिट र ठीक रहनु पर्छ। फिट र ठीक हुन, व्यायाम आवश्यक छ। तपाईं आफ्नो घर नजिकको विभिन्न प्रकारका व्यायाम कार्यक्रमहरू सामेल हुन सक्नुहुन्छ। तपाईं विभिन्न प्रकारका योगहरू हेर्न र सिक्न सक्नुहुन्छ, र अनलाईन अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंको दैनिक तालिकामा ती चीजहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
पहेलो जूता: तपाईंले फिट र आरामदायक जूता लगाउनु पर्छ। यो पर्ची प्रतिरोधी हुनुपर्छ।
हामी कसरी हाम्रो घर भित्र सुरक्षा सुधार गर्न सक्छौं?
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि गलियारेहरू स्पष्ट र राम्ररी उज्यालो हुन्छन्।
यदि कुनै पनि अवरोध हटाउनुहोस्।
तपाईंको घरमा उचित प्रकाश छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको घरको सबै स्थानहरू एक उचित प्रकाश छ। तपाईं सीएफएल, प्लग-इन राईहरू, आन्तरिक संवेदनशील लाइटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको घरको फर्नीचर तेर्सो किनाराहरू / कोनेहरू छैनन्।
तपाईंको घरको सबै ढोका खोल्न सकिन्छ र सजिलो बन्द।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको घरको उचित सुरक्षा उपाय हुनुपर्छ। अलार्म प्रणाली जस्तै, आगो बुझाई वा आगो कम्पास।
तपाईंको घरमा उचित मेडिकल किट (सुरक्षा किट) हुनुपर्छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको घरको बेड र कुर्सुरहरू बलियो हुन्छन्।
हाम्रो घर बाहिर सुरक्षा कसरी सुधार गर्ने?
लचीन, फङी र मास्कहरू मार्नुहोस् जसले बाटो फिसाउने गर्छ।
बाटो राम्ररी सुत्न प्रयास गर्नुहोस्।
सूर्य चमकबाट बच्नको लागि टोप र धूप काँच पहनुहोस्।
क्रक, टूटेको र असमान पथहरू मरम्मत गर्नुहोस्।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि बाहिरका चरणहरू राम्ररी चलेको छ।
बगैचा उपकरणहरू खाली गर्नुहोस्।
एक महिना वा दुई भित्र आँखा जाँच गर्नुहोस्।
खुट्टा सम्बन्धी समस्याहरूको अवस्थामा, नियमित पङ्क्तिबद्धता भित्र आफ्नो पोडियस्ट्रिस्टलाई भेट्नुहोस्।
तपाईंको आहार र अन्य सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा एक चिकित्सक वा अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीलाई सल्लाह दिनुहोस्।
"स्वस्थ आहार स्वस्थ दिमागको कुञ्जी हो।"
यदि तपाइँ बिस्तारै बिर्सनु भएकोमा सम्झनाहरू:
कृपया नआत्तिनुहोस्। शांत रहनुहोस्।
मद्दतको लागि कल गर्नुहोस्!
आवश्यक भएमा मद्दतको लागि 911 (आपतकालीन सेवाहरू) डायल गर्नुहोस्।
तपाईंको छिमेकी वा तपाईंको डाक्टरलाई कल गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
यदि तपाईं उठ्न र आफ्नो आफ्नै स्थितिलाई सम्भाल्न सक्नुहुन्छ:
क्रेलिंग स्थितिमा जानुहोस्।
सुरक्षित स्थानमा क्रल गर्नुहोस्।
आफ्नो खुट्टामा उठ्न प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईं स्थितिलाई सम्भाल्न सक्नुहुन्न भने:
सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रयास गर्नुहोस्।
ठूलो आवाज बनाउनुहोस् ताकि तपाईं नजिकैको मान्छे यो सुन्न सक्नुहुनेछ, र तपाई तिनीहरूलाई मद्दतको लागि सोध्न सक्नुहुनेछ।
यदि कसैले तपाईंलाई सुनेको छ भने आफैलाई आराम गर्न प्रयास गर्नुहोस्, र पछि फेरि उठ्न प्रयास गर्नुहोस्।
6587 कुल दृश्यहरू 8 हेराइ आज